Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Facial skin care ယောက်ျား မျက်နှာ
Facial skin care ယောက်ျား မျက်နှာ
1 Feb 11, 07:28
ကျွန်တော့် မျက်မှာမှာ ချွေးပေါက်ကျယ်သလိုမျိုး အပေါက်အပေါက်တွေ အများကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ ပျောက်အောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။
1. Wash your face မျက်နှာသစ်တာ ရေခပ်နွေးနွေးနဲ့ တနေ့ ၂ ကြိမ်သစ်ပါ။ ဆပ်ပြာအဆန်းမသုံးပါနဲ့။ မျက်နှာအလှပြုပြင်သူတွေက alpha hydroxy acid ပါတာ အသုံးခိုင်းတယ်။
2. Shave Carefully နုတ်ခမ်းမွှေး-မုတ်ဆိတ်မွှေးရိတ်တာ ဂရုစိုက်ပါ။ နုတ်လေမျက်နှာကြမ်းလေဖြစ်မယ်။ shaving cream ကောင်းတာသုံးပါ။ ဝက်ခြံရှိတဲ့နေရာကို ရိတ်ရင် အထူးသတိထားပါ။
3. Aftershave lotion နုတ်ခမ်းမွှေး-မုတ်ဆိတ်မွှေးရိတ်ပြီးရင် Alcohol based aftershaves မသုံးပါနဲ့။ antiseptic to prevent infection ပိုးသေစေတာ၊ moisturizer အစိုဓါတ် ပေးတာနဲ့ fragrance မွှေးကြိုင်တာပါစေရမယ်။
4. Use Sunscreen သုံးပါ။ SPF factor of 15 ဆိုရင် လုံလောက်ပါတယ်။
5. Use Moisturizer သုံးပါ။
6. Tone your skin glycolic ဒါမှမဟုတ် alpha hydroxy acids ပါတာကောင်းတယ်။
7. Haveabalanced diet အစာ-အာဟာရ မျှတ၊ ပြည့်ဝအောင် စားသောက်ပါ။ ရေများများသောက်ပါ။ Vitamin C, E, B နဲ့ zinc တွေပါတာ ကောင်းတယ်။
8. Exercise ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။